I-VTube Studio Apk Download For Android [2D Anime] - Luso Gamer
I-VTube Studio Apk Ukulanda Kwe-Android [2D Anime]
Umbukeli uyakhuthazeka lapho ebona i-YouTuber ehlukile ebonisa izinhlamvu eziphelele ze-2D Anime. Kodwa-ke, abasebenzisi ngeke babonise futhi batshele ngamaqhinga. Kodwa namuhla lapha sibuyile nalolu hlelo lokusebenza oluphelele lwe-android olubizwa nge-VTube Studio Apk.
Manje ukuhlanganisa i Isicelo se-Anime izovumela abasebenzisi beselula. Ukuze ujabulele ukukhiqiza uhlamvu lwabo lwe-anime ye-Live 2D Virtual ufaka uhlelo olulodwa lwe-android. Yebo, abasebenzisi beselula manje sebengakwazi ukukhiqiza kalula izinhlamvu eziningi ze-anime.
Inqubo ibonakala ilula futhi ayidingi ikhono elengeziwe. Nokho ngokucabangela ukunethezeka komsebenzisi weselula, lapha sizochaza zonke izinyathelo ezibalulekile. Labo bazosiza ekwakhiweni kwezinhlamvu eziphelele mahhala. Uma usulungile landa i-VTube Studio App.
Iyini i-VTube Studio Apk
I-VTube Studio Apk isebenza kuzo zombili izindlela ku-inthanethi nokungaxhunyiwe ku-inthanethi. Manje besebenzisa uhlelo lokusebenza, opharetha beselula bangakwazi ukukhiqiza kalula izinhlamvu eziningi ze-anime ngaphandle kosizo noma ukufaka amakhodi. Vele ufake lolu hlelo lokusebenza olushiwo futhi ujabulele isibonisi samahhala se-anime 2D esibukhoma.
Eminyakeni embalwa edlule ngaphambi kokusungulwa kwama-smartphones. Izinketho ezinjalo bezingenakufinyeleleka kubantu futhi bazizwa bekhathele kakhulu lapho bezwa ngezici ezinjalo. Ngoba ukwenza imisebenzi enjalo kusho lukhulu kubabukeli.
Ngokuthuthuka kwezobuchwepheshe, abantu baqala ukuzwa amaqhinga ahlukene. Lokho kungabasiza ekuphatheni isibonisi esibushelelezi. Nokho, ikhwalithi ingase ibe sengozini futhi ababukeli bangase bazizwe bengakhangi kangako kubasakazi.
Okwamanje, amathuluzi aku-inthanethi ahlukene nemibhalo kuyafinyeleleka. Lokho kungasiza abasebenzisi ekunikezeni isibonisi esibonakalayo esihle se-2D. Kodwa uma kuziwa ekufinyeleleni leyo mibhalo namathuluzi, abasebenzisi bangadinga ukubhalisa. Ngakho-ke uma sicabangela ukufinyelela okulula nokukhululekile silethe i-VTube Studio Android.
Igama I-VTube Studio
Usayizi 156 MB
Igama lephakheji com.denchi.vtubestudio
Iyadingeka i-Android 7.0 no-Plus
Eqinisweni, uhlelo lokusebenza lukhululekile ukulanda kusuka kuwebhusayithi yethu. Ngisho nenqubo yokusebenzisa nokufaka nayo ilula. Vele ulande ifayela le-Apk lakamuva kuwebhusayithi yethu. Bese uqala inqubo yokufaka chofoza ifayela.
Manje vakashela imenyu yeselula bese wethula uhlelo olufakiwe. Nika amandla izimvume ezidingekayo futhi ufinyelele kalula kudeshibhodi eyinhloko. Manje khetha isithonjana somlingiswa futhi sizobonisa uhlu olude lwamakhathuni ahlukahlukene apopayi.
Ikhathuni ngalinye linezici nezici ezihlukile. Labo abanezinhlamvu zezinhlamvu zangaphandle, khona-ke labo bangazingenisa kalula ngokukhetha inketho eyenziwa ngesandla. Uma usuqedile ukukhetha, manje chofoza isithonjana segalari ukuze ufinyelele amatimu angemuva.
Ukuze wenze ngokwezifiso izici eziyinhloko, sicela ukhethe inkinobho yokusetha futhi uguqule kalula inketho ngokufanele. Ideshibhodi yokusetha ingasiza ekuguquleni Izinhlamvu, Umculo, Ikhamera kanye nezinketho zevidiyo. Khumbula ukuthi isistimu yokulandelela ethuthukisiwe ifakwe ngaphakathi.
Okusho ukuthi amakhanda anyakazayo nawo angakhombisa ukubukeka okufanayo ezinhlamvu. Labo basebenzisi be-Android abazimisele ukujabulela izici ze-pro kumele bathenge ilayisense lochwepheshe. Uma uthanda futhi ulungele ukuqala isiteshi se-anime se-YouTube bese ufaka i-VTube Studio Download.
Ukufaka uhlelo lokusebenza kunikeza isibonisi esibonakalayo esithuthukisiwe.
Lokho kuvumela amalungu ukuthi ajabulele ukubonisa izinhlamvu ze-anime.
Isibonisi se-Live2D sizosiza ekunyakazeni i-anime.
Kufakwe inzwa yokunyakaza ethuthukisiwe.
Yize i-eye tracker ifinyeleleka ngaphakathi kwedivayisi ye-iPhone.
Nokho, lesi sici asitholakali kumadivayisi e-Android.
Inketho yokubhalisa igcinwa ngokuzithandela.
I-interface yohlelo lokusebenza inobungane beselula.
Amatimu angemuva ahlukene ayatholakala.
Imibhalo yohlobo egqwayizayo eminingi iyafinyeleleka.
Ungalanda Kanjani I-VTube Studio Apk
Lolu hlelo lokusebenza lwe-android luyafinyeleleka ukuze ululande ku-Google Play Isitolo ngokuqondile. Kodwa opharetha abaningi beselula abakwazi ukufinyelela ifayela le-Apk ngokuqondile. Isizathu salokho kungenxa yokuhambisana kwe-OS nokunye ukuvinjelwa.
Ngakho-ke lapho abalandeli bengalanda khona i-Apk uma bengavunyelwe ukufinyelela esitolo esisemthethweni. Ngakho-ke esimweni esinjalo sincoma ukuthi abasebenzisi bafinyelele iwebhusayithi yethu. Futhi landa inguqulo yakamuva yefayela lohlelo lokusebenza ngokuqondile ngaphandle kokucela noma iyiphi imvume.
Ukuba khona kwefayela lohlelo lokusebenza nge-Google Play Isitolo kunikeza ukuthinta okuhle. Lokho kuvumela abasebenzisi beselula abazwelayo ukuthi bathembe izinhlelo zokusebenza ezithile. Ngisho nathi kakade sifake ifayela lokusebenza phezu Smartphones ezahlukene futhi asitholanga inkinga enkulu.
Ezinye izinhlelo zokusebenza ze-android ezihlobene ne-anime zabiwe lapha kuwebhusayithi yethu. Ukuze uhlole futhi ujabulele lawo mafayela e-Apk ahlobene sicela ulandele izixhumanisi ezinikeziwe. Okukhona I-Bilibili Comics Apk futhi I-Moan Chan Apk.
Ngakho-ke ubuhlale uphupha ngokuba yi-YouTuber, kodwa ngenxa yesici esinamahloni. Uhlala njalo ugwema ukuthatha isinyathelo sokuqala. Kodwa manje ukubonisa uhlamvu lwe-2D Anime esikhundleni sobuso bangempela kuzosiza abasebenzisi ekulweni nenkinga yamahloni. Usulungele ukuyizama bese ulanda i-VTube Studio Apk.
Izigaba Ezokuzijabulisa, Apps Amathegi Uhlelo lokusebenza lwe-Anime, I-VTube Studio Android, I-VTube Studio Apk, Uhlelo lokusebenza lwe-VTube Studio, I-VTube Studio Download Imeyili kwemikhumbi
Ukulanda kwe-Gappx Apk Kwe-Android [Hola Imali]
I-Barber Chop Apk Ukulanda Kwe-Android [Umdlalo]